Fihaonana tamin’i Poutine, Arian’ireo mpitarika orinasa any an-tatatra ny zo nomerikan’ireo mpampiasa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2019 14:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Deutsch, srpski, Español, English
Vladimir Putin manatrika ny vovonan'ny fandraharahana anaty aterineto tao Rosia, Maosko 10 Jona 2014, Kremlin Press Service.
Nandritra ny fihaonana iray efa nandrasana fatratra, niresaka tamin'i Arkady Volozh avy amin'ny Yandex, Dmitri Grishin avy amin'ny Mail.ru sy olona maro hafa i Vladimir Putin — samy mpitarika orinasa anaty aterineto mety ho very vola be raha toa ny fanakendan'i Kremlin ny aterineto ka manosika ireo Rosiana mpanjifa hitondra ny fandraharahàny ho any amin'ireo orinasa vahiny mpifaninana, toy ny Google.. Ny “Vovonan'ny Fandraharahana anaty Aterineto ao Rosia” dia nokarakarain'ny Masoivoho ho an'ireo Hetsika Stratejika Santatra — fikambanana iray tsy mitady tombony ara-bola najoron'i Poutine tamin'ny May 2011, natao indrindra mba hampihenàna ny vesatry ny fikarakaràna antontan-taratasy ho an'ireo fandraharahàna vaovao.
Nandritra ny fepotoana fahatelo itondran'i Poutine, izay nanomboka ny 2012, namoaka tsy tapaka andiana fepetra sy lalàna vaovao mametra ny fahalalahana ety anaty tambajotra ny governemanta. Ny Aogositra 2014, hiditra an-tsehatra ireo lalàna maromaro “miady amin'ny asa fampihorohoroana”, mametraka amin'ireo bilaogera sy tranonkala ireo fameperana vaovao sy zavatra maromaro tsy maintsy arahana. Mbola betsaka ny lalàna lazaina fa manangasanga ary mety hametraka olana fanampiny ho an'ireo milina fikarohana toy ny Yandex.
Nandia fotoan-tsarotra ny fandraharahan'ny RuNet. Tamin'ny Aprily lasa, rehefa nilaza imasombahoaka i Poutine hoe fehezin'ny CIA ny tontolon'ny tranonkala. Rehefa nitarainany ny momba ny tsindry ataon'ny tandrefana amin'ireo orinasa misahana aterineto ao Rosia, tampotampoka teo ny Yandex dia very 16 isanjato tao amin'ny Nasdaq.
Taorian'ireny fivoaran-draharaha ireny, ary rehefa jerena ny zavamisy hoe efa ho taompolo iray i Poutine no tsy nifampiresaka tamin'ireo filohanà orinasa misahana aterineto, noheverina hafampàna ihany ny kaonferansa androany. Kanefa tsy nisy nifandraisany tamin'izany ny zavatra nitranga.
Ireo vahiny manankaja nasaina tamin'ny vovonan'ny RuNet androany tsy nametraka na dia fanontaniana iray aza navantana tamin'i Poutine mikasika ilay lalàna faneriterena ny aterineto izay nitombo be tato anatin'ny taona vitsivitsy. Tsy nisy olona nametraka fanontaniana momba ilay lalàna izay hampitovy mihitsy ny “bilaogera malaza” amin'ireo fampitambaovao ho an'ny daholobe. Na iray aza tsy nisy nanontany momba ilay lalàna izay hanery ireo tranonkala tsy maintsy hitahiry angondrakitra mandritra ny enimbolana ao anaty lohamilina azon'ireo mpampihatra lalàna ao Rosia hidirana. Tsy nisy na teny iray aza mba nolazaina momba ny Lehiben'ny Fampanoavana, izay ankehitriny nomena fahefana ivelan'ny fitsaràna mba handràra tranonkala noho ny resaka “fanaovana an-tendrony”.
Ny olona sahy nanemitra akaiky ilay olana saropady momba ny fahalalahana politika ety anaty tambajotra dia i Dmitri Grishin avy amin'ny Mail:ru, izay nanosoka am-pitiavana ny hevitra tokony hanakaikezan'ny governemanta ireo orinasa misahana aterineto alohan'ny handaniany fepetra vaovao. “Matetika ny hevitra any anatin'ireny fepetra ireny no mitombina” hoy izy nanomboka, “saingy indrisy, indraindray mampahatahotra ny vahoaka ilay fampidirana azy, raha lazaina tsotra” Mba hisorohana an'izay, nanolotra “dingana ara-drafitra” iray i Grishin mba hiantohana ny fahazoana tamberina tsaratsara kokoa.
Ho valin'izay dia nanazava i Poutine fa ao anaty “fiarahamonina iray ara-dalàna” dia tsy azo ihodivirana ireo fepetra ireo, tamin'ny filazana tamin'ireo nanatrika fa efa tena goavana be ankehitriny ny tsenan'ny aterineto ao Rosia ka tsy afaka ialàna ny fanarahamason'ny fanjakàna. “Isanandro, iray amin'ny olompirenena telo no mitsidika ny aterineto,” hoy i Poutine, “ary mazava ho azy fa mila asiana karazana fepetra io.” Avy eo nolazain'ny filoha fa efa nalaina ny hevitr'ireo lehibenà orinasa misahana aterineto talohan'ny nampidirana ho anaty lisitra mainty ireo tranonkala izay voalaza fa mampiantrano sary vetaveta ahitàna ankizy sy ireo torohay manandratra ny famonoantena, ny zavamahadomelna voaràra, ary ny asa fampihorohoroana. “Samy olondehibe daholo isika” hoy i Poutine nanamarika, ary avy eo nanainga ny daholobe mba “hahatsiaro ny ankizy”
Valinkafatra haingana be tamin'ny vokatr'ilay fihaonana to the results of the meeting no avy amin'ny tsena — i Kremlin, raha ny fahitàna azy, dia nilaza fa tsy hangarona ny paosin'ireo mpiara-miombona antoka. Tao anatin'ny telo volana, nahatratra ny faratampony ny petrabola Yandex, nahafafa ireo fatiantoka tamin'ny Aprily. Tao amin'ny tsenam-pifanakalozana petrabola tao Londona, ireo petrabola tao amin'ny Vondrona Mail.ru ihany koa dia nahatratra ny haavo farany ambony indrindra htan-dry zareo hatramin'ny 1 Aprily
Zavatra iray mahafinaritra ny fahalalahan'ny aterineto, saingy toa tsy misy zavatra manamaivamaivana ireo mpampiasa vola afa-tsy ireo sarin'i Vladimir Poutine mitsikitsiky ao anaty efitrano iray feno mpitantana ambony mitanondrika.